RealThadin - Page 70 of 111 - News and Media
ရွှေလမင်းထမင်းဆိုင် ရိုက်နှက်ခဲ့မှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရဲ ၇ ဦးကို အရေးယူမည်ဟု မကွေးရဲမှူး ပြော
June 19, 2020 RealThadin 0
မကှေးမွို့ ရှလေမငျးထမငျးဆိုငျမှာ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျတှေ ဝငျရောကျရိုကျနှကျခဲ့တဲ့ ဖွဈစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး ဇှနျ ၁၈ ရကျနမှေ့ာ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ ၇ ဦးကို အရေးယူသှားမယျလို့ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့မှူးက ပွောပါတယျ။ ရှလေမငျးထမငျးဆိုငျနားမှာ သမီးယောကျဖခငျြး ဓားတှေ၊ တုတျတှကေိုငျ ခိုကျရနျဖွဈကွစဉျ ဓားကိုငျသူအား လှညျ့ကငျးလှညျ့နတေဲ့ တပျဖှဲ့ဝငျတှကေ ဖမျးဆီးဖို့ ကွိုးစားရငျး […]
အမေစုရဲ့အသက် ၇၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဒေါင်း
ဒီနေ့ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့ကတော့ မြန်မာ နိုင်ငံအတွက် အယူမရှိ အပေးသာရှိတဲ့ မိခင်သဖွယ် အားကိုးရသူအမေစုရဲ့(၇၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက် ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါင်းကလည်း မွေးနေ့ဆုမွန်းကောင်းတောင်းပေးထားပြီး မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေးသားကာ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားထဲ့ပါတယ်။ကဗျာလေးကတော့ “သူမနှလုံးသားဟာ ဗလာ”ဆိုတဲ့ကဗျားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကဗျာလေးကိုတော့ ဒေါင်းက “”သူမနှလုံးသားဟာ..ဗလာ”နှလုံးသားထဲစီးဆင်းနေသမျှချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား အားလုံးပေးလိုက်တယ် နှလုံးသာထဲမှာ ဗလာ…ဗလာ….ဗလာ…စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းဟာ ဗလာ…အသွားရှိပြီး…အပြန်မမျှော်လင့်ဗလာ…အပေးရှိ…အယူမရှိ…ဗလာ သူမသက်တမ်းအဆက်ဆက် အပြုံးမပျက်…ကမ္ဘာပျက်လဲမြန်မာမပျက်ဖို့ […]
လမ်းပြင်သူ အယောက် ၃၀ ဆီ တစ်လတိတိနေ့စဉ် သွားလှူတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးရဲ့ အလှူ . . .
လမ်းပြင်သူ အယောက် ၃၀ ဆီ တစ်လတိတိနေ့စဉ် သွားလှူတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးရဲ့ အလှူ လမ်းပြင်နေတဲ့ လူအယောက် ၃၀ ကို နေ့စဉ် လှူဒါန်းနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးအကြောင်း မျှဝေချင်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာ အဆိုပါလမ်းပြင်တဲ့လူ အယောက် ၃၀ ကို နေ့စဉ် ရေဗူးတွေ မုန့်တွေ လှူခဲ့တာ တစ်လရှိပါပြီ… […]
အသက် ၁၀၀ ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ယောက်တည်း ချုံမြက်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့ အဘွား . . .
အသက် ၁၀၀ ရှိပေမဲ့ ရွာလယ်လမ်းမကြီးကို တစ်ယောက်တည်း ချုံမြက်ရှင်းပေးခဲ့တဲ့အဘွား စိတ်စေတနာကောင်းဆိုတာ အသက်ငယ်သည် ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းမှာ ထားနိုင်တဲ့ ရှိနိုင်တဲ့ လေးစားဖွယ်ချစ်ခင်ဖွယ် စိတ်လေးပါပဲဒီလိုပဲ ပရဟိတအလုပ်ဆိုတာလည်း ငယ်သည် ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းမိမိတတ်နိုင်သလောက် လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပါ…. အဲဒီလို အများအကျိုးအတွက် ငယ်သည်ကြီးသည်မဟူ လူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို သက်သေပြခဲ့တာကတော့ အသက် […]
မိုးတဖွဲဖွဲရွာတဲ့ မိုးကုတ်မိုးက ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲ လက်တွေ့ပါပဲ ဒီနေ့သေကြပြန်ပြီ စိတ်မကောင်းစရာပါ
စိတ်မကောင်းစရာဘဲ သေကြပြန်ပြီ…..မိုးကုတ်အနောက်ပိုင်း ကသည်းအုပ်စု ဘိုကုန်းရပ် (၁၉ . ၆ . ၂၀၂၀)တစ်နေ့ကပဲသတိပေးစာရေးပါသေးတယ် မိုးတဖွဲဖွဲရွာတဲ့မိုးကုတ်မိုး ဘယ်လောက်ကြောက်စရာ ကောင်းသလည်းဆိုတာ ကနေ့မနက် (၉) နာရီခန့်က အိမ်ဝင်းဖောင်ဒေးရှင်းတူးရင်း မြေပိလို့ သုံးယောက် သေပြန်ပြီ ။ နောက်ဆက်တွဲ ….တယောက်ဆေးရုံပို့နှစ်ယောက်က ဆက်ဖော်နေဆဲ ပါ… Edit […]
လပြင်းတိုင်ခတ်မှုကြောင့် ဘီလူးကျွန်း ကမာမိုရွာ ကျိုက်ပိကျောင်းတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမြင်ကွင်း
၁၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခွဲခန့်အချိန် လေပြင်းတိုင်ခတ်မှုကြောင့်ဘီလူးကျွန်း ကမာမိုရွာကျိုက်ပိကျောင်းတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမြင်ကွင်း.. Credit-မင်းအောင်မိုး ၁၈.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ညနေ၃နာရီခွဲခန့်အချိန် လေပြင်းတိုင်ခတ်မှုကြောင့်ကမာမိုရွာကျိုက်ပိကျောင်းတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမြင်ကွင်း.. Credit-မင်းအောင်မိုး
အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်ပြည့် စိန်ရတုမွေးနေ့လေးမှာ လူ(၇၅၀၀) ရဲ့ ဆုတောင်းစာတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အမေစုရဲ့ပုံ
အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်ပြည့် စိန်ရတုမွေးနေ့လေးမှာ လူ(၇၅၀၀) ရဲ့ဆုတောင်းစာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အမေစုရဲ့ပုံ မဟာမြိုင်သဲဖြူတောရဆရာတော်ဘုရားကြီးအား အာရုံဆွမ်း ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်တို့ မိသားစုလေး ဒီနေ့ဇွန်လ(၁၉) ရက်နေ့လေးကတော့ အမေစုရဲ့ (၇၅) နှစ်ပြည့် စိန်ရတုမွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေက လေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်မို့ အရင်နှစ်က အသက်(၇၄) […]
ယနေ့မနက် ထပ်တိုးလူနာ(၂၃)ဦးက ထိုင်းနဲ့မလေးရှားက ပြစ်ဒဏ်စေ့အကျဉ်းသားများဖြစ် . . .
မြဝတီနယ်စပ်ဂိတ်ကနေပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းကပြန်လာသူ (၁၉)ဦးနဲ့ မလေးရှားကပြန်လာသူ (၄)ဦး စုစုပေါင်း (၂၃)ဦးမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ဒီကနေ့မနက် (၈)နာရီမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ထပ်တိုးလူနာ (၂၃)ဦးစလုံးက ထိုင်းနဲ့မလေးရှားမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာတွေနဲ့ ပြစ်ဒဏ်အသီးသီးကျခံပြီးလို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တဲ့ ပြစ်ဒဏ်စေ့အကျဉ်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဇွန်လ (၈)ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို (၃၅)ဦး လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး […]
အမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဒေါင်းပုံစံနာရီနဲ့ နှင်းဆီကိတ်မုန့်လေးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ နှင်းဆီရင်ခွင်အဖွဲ့သားများ
အမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက် ဒေါင်းပုံစံနာရီနဲ့ နှင်းဆီကိတ်မုန့်လေးကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ နှင်းဆီရင်ခွင်အဖွဲ့သားများ မင်းသားချောလေးကျော်ကျော်ဗိုလ်ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်ခုကို အခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆုတွေကိုလည်း သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်ကတော့ နှင်းဆီရင်ခွင်အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထွန်းထွန်း နေတိုး မင်းမော်ကွန်း ရဲလေးတို့နဲ့ ညီအကိုအရင်းတွေလို ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ် နှင်းဆီရင်ခွင်အငြိမ့်အဖွဲ့ကိုတော့ […]
ဦးဇင်းကိတ္ထသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း)ရဲ့ မွေးနေ့မှာ သံဃာတော်တွေအတွက် ဝါဆိုသင်္ကန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ သားညီ